दोस्रो चरणको निर्वाचनः कतै उत्साह त कतै निराशा ! - दोस्रो चरणको निर्वाचनः कतै उत्साह त कतै निराशा !
२०७४, १५ असार, 03:58:00 AM
१५ असार, काठमाडौं । प्रदेश नं.१, ५ र ७ मा हिजो भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मिश्रीत परिणाम आएको छ । हिजो दिनभर कतै मतदाता उत्साहित भएर मतदान गरे भने दिनै भर मतदान अधिकृतहरु मतदाता भोट हाल्न आउने आशामा बसे पनि रित्तोहात पर्किए । तीन प्रदेशका ३३४ तहका १५ हजार ३८ प्रतिनिधि छान्न बुधबार भएको निर्वाचनमा ७१ प्रतिशत भन्दा बढी मतदान भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । हिजो दिनभर आधा दर्जन छिटपुट घटनाबाहेक सामान्य रूपमा सम्पन्न भएको छ ।
केही क्षेत्रमा राति ८ बजेसम्म मतदान जारी रहेको थियो । आयोगले दिएको जानकारीअनुसार सबैभन्दा बढी बाजुरामा ८० प्रतिशत र सबैभन्दा कम भोजपुरमा ६६ प्रतिशत मतदान भएको छ ।
पहिलो चरणमा २८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनमा ७६ प्रतिशत मत खसेको थियो । बुधबार एक महानगरपालिका, सात उपमहानगरपालिका, १११ नगरपालिका र २१५ गाउँपालिकामा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । ३३४ स्थानीय तहबाट १५ हजार ३८ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हँुदै छन् । पहिलो चरणका २८३ स्थानीय तहबाट १५ हजार ५ सय ५६ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । तेस्रो चरणको निर्वाचन प्रदेश नं. २ का ८ जिल्लामा १२७ स्थानीय तहमा आगामी असोज २ गते हुने भएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले ३५ जिल्लाका ३३४ स्थानीय तहका ८३६३ मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक रूपमा मतदान भएको जानकारी दिएका छन् । बझाङको एउटा मतदान केन्द्रमा भने मतदान स्थगित भएको छ । स्थगित केन्द्रको मतदान स्थानीय निर्वाचन अधिकृतले स्थानीय दलहरूसँग समन्वय गरी निर्वाचन मिति र समय निर्धारण गर्ने उनले बताए ।
वर्षाका कारण केही केन्द्रमा ढिलो गरी मतदान, केही स्थानमा बम राखेर निर्वाचन बिथोल्न प्रयास गरिए पनि सुरक्षा प्रबन्ध राम्रो गरिएकाले शान्तिपूर्ण र उत्साहपूर्ण रूपमा मतदान कार्य सम्पन्न भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले बताए।
असन्तुष्टिका कारण स्थानीयले नवलपरासी र सोलुखुम्बुको एक–एक स्थानीय तहका एक–एक वडामा मतदान बहिष्कार गरेका छन् । मतदानमा अवरोध सिर्जना गर्न खोज्नेलाई नियन्त्रणमा लिई निर्वाचन कार्यलाई सफल बनाउनमा सुरक्षाकर्र्मीले देखाएको तदारुकतालाई आयोगले धन्यवाद दिएको छ ।
निर्वाचन बहिष्कारका लागि आह्वान गरेको राजपा नेतृत्वले भने नैतिक र राजनीतिक पराजय भोगेको छ । विभिन्न ठाउँमा पार्टीकै महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूले स्वतन्त्रु हैसियतमा चुनाव लडे भने राजपाप्रति सहानुभूति राख्ने मतदाताले उत्साहपूर्वक मतदानमा भाग लिए ।
सरावल–६ मा २ मत, बझाङमा स्थगित
त्यस्तै, रुपन्देहीको कोटीभीमाई गाउँपालिका–१ मा असार १६ गते मतदान हुने भएको छ । माओवादी केन्द्रबाट वडा सदस्यको मनोनयन दर्ता गराएका मुरले मल्लाहको शनिबार निधन भएपछि मतदान पर सारिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार नवलपरासीको सरावल गाउँपालिका वडा नं. ६ मा जम्मा २ मत खसेको छ ।
मतदान स्थलमा जन्मियो बच्चा
बुधबारको मतदानमा केही रमाइला र अनौठा घटना पनि भए । दाङ जिल्लाको एक मतदान केन्द्रमा बिहान साढे नौ बजेतिर मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिले सोही मतदान केन्द्रलाई लक्ष्य गरी सुतली बम प्रहार गरेका थिए । उक्त बमलाई प्रहरी हवल्दार दुर्गाबहादुर रानाले जोखिम मोल्दै हातले सुरक्षित ठाउँमा मिल्काइदिए । उनको यो जोखिम र बहादुरी कार्यले त्यहाँ कुनै दुर्घटना हुन पाएन ।
त्यस्तै, अछाममा दुई महिलाले मतदानका लागि लाइनमै बस्दा बच्चा जन्माएका छन् । अछाम रामारोशन गाउँपालिका वडा ४ को बाटुला सैनस्थित नन्दकाली आधारभूत विद्यालयको क मतदान केन्द्रमा भोट हाल्न लाइनमा लागेको दुई महिलाले बच्चा जन्माएका हुन् । रामारोशनकी २५ बर्षीय मीना बोहोरा र शुभा हामले बच्चा जन्माएको आजका पत्रपत्रिकामा खबर छ ।
सोलुखुम्बुको तिङलामा मतदान भएन
सोलुखुम्बु जिल्लाको नेचासल्यान गाउँपालिका–६ तिङ्लामा स्थानियले मतदान गरेनन् । स्थानीय तह पुनःसंरचना आफ्नो अनुकूल नभएको भन्दै उनीहरूले विरोधस्वरूप मतदान नगरेका हुन् ।
नेचासल्यान–६ तिङ्लाका पाँचवटै मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीले बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतपेटिका राखेर मतदान प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि उक्त समयभित्र मतदानका लागि केन्द्रमा कोही पनि नआएको निर्वाचन अधिकृत आनन्दराज पन्तले जानकारी दिए ।
नेचासल्यान गाउँपालिका–६ तिङ्लामा दुई हजार ४७६ मतदाता छन् । यो वडामा कसैले पनि उम्मेदवारी दिएका थिएनन् । सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकाको सट्टा नेचासल्यान गाउँपालिकामा तिङ्लालाई समावेश गरेपछि स्थानीयले यसको विरोध गर्दै आएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष बालकुमार कार्कीले जानकारी दिए । स्थानीय सरोज बस्नेतले भोट दिन नपाउँदा नरमाइलो लागे पनि त्यो आफूहरूको बाध्यता भएको बताए ।
एक हप्तामा परिणाम आउने
मतदान सम्पन्न भएलगत्तै मतपेटिका संकलन कार्य भएको आयोगले जनाएको छ । मतपेटिका जम्मा गरेपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतले जिल्लास्थित सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी मतगणनाको समय र स्थान तोक्नेछन् । भरतपुरमा मतपत्र च्यातिएको घटनाजस्तै यो पटक नदोहोरियोस् भनेर आयोगले मतगणनामा पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध गरी मतगणना गराउने व्यवस्था गरेको अयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताउनुभयो । ुधेरै टोली बनाएर उचित ठाउँको व्यवस्थापन गरी सुरक्षा प्रबन्ध गरेर मात्रै मतगणना गर्न निर्देशन दिइसकेका छौं, उनले भने । वर्षाको समय भएकाले मतपेटिका जोगाउन त्यही खालको व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शर्माका अनुसार नगरपालिकाको सात दिनभित्र र गाउँपालिकाको तीन दिनभित्र मतगणना सम्पन्न गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।